Citigroup Inodoma Amai Jane Fraser Kuve Mukuru Wayo Kutanga Gore Rinouya
Gumiguru 14, 2020
Kambani yeCitigroup yakazivisa kuti ichange ichitungamirwa naAmai Jane Fraser mukutanga muna Kukadzi 2021.
Citigroup ndiyo muridzi weCitibank, bhanga guru rechina muAmerica, richitivera shure kwemabhanga e JPMorgan Chase, Bank of America, neWells Fargo.
Amai Fraser vachave mudzimai wekutanga kutungamirira bhanga guru mu America mushure mekuenda pamudyandigere kwemukuru webhabga iri, VaMichael Corbat, avo vane makore makumi matatu nemanomwe vachishandira bhanga iri.
Vanodzidzisa zvemabhizimisi paDeVry University, Muzvinafundo Elliot Masocha, vanoti zvaitwa neCitigroup chinhu chikuru uye zvinopa simba kuvanhukadzi vanoshanda mubasa iri.
Vati Amai Jane Fraser vakawana basa iri nekushanda nesimba pabhanga iri kwemakore anopfuura gumi nematanhatu.
Citibank ine vanhu vanopfuura mamirioni mazana maviri vanochengeta mari dzavo mubhanga iri, iro rinoshanda munyika dzinopfuura zana nemakumi matanhatu.
Kambani yeCitigroup ine vashandi vanoita zviuru mazana maviri nezvina.
Amai Fraser vakadzidza paHarvard University nekuCambridge University uye vave nemakore gumi nemanomwe vachishandira Citigroup.
VaMasocha vanoti kuti vapiwe basa guru iri, vakuru veCitigroup vakatarisa dzidzo, kugona basa pamwe neruzivo rwaAmai Fraser vakawana vainazvo zvese.
Hurukuro naMuzvinafundo Elliot Masocha
Kukadzi 19, 2021
VaBiden Voenderera Mberi Vachishandura Zvakasiya Zvaitwa naVaTrump
Mutungamiri weAmerica, VaJoe Biden, vakazivisa zviri pamutemo zviri mubhiri ravo rekuvandudza mitemo inobata kupinda nekugara muAmerica kwevanhu vanobva kune dzimwe nyika.
Bhiri iri rikatambirwa kuva mutemo, rinopa mukana kumamiriyoni gumi rerimwe evanhu vari muAmerica zvisiri pamutemo, kusanganisira vana vavo vakapinda muAmerica vari vadiki.
Bhiri iri riri kutsigirwa nemari inoita mabhiriyoni mana emadhora achashandiswa mukati memakore mana mukurwisa huori, kusimbaradza kuchengetedzwa nekubudirira kwevabvakure munzvimbo dzavanogara.
Bhiri iri rine hurongwa hwekuvaka nzvimbo mudunhu reCentral America yekumisa vabvakure vanoda kuenda kumuganhu weAmerica neMexico nechinangwa chekupinda muAmerica zvisiri pamutemo.
Gweta rezvekupinda nekubuda kwevanhu munyika, VaEmmanuel Ncube-Socks, vanoti nyaya dzinobata vabvakure dzasvika pakaoma muAmerica nekuti dzave kutorwa senyaya dzerusarura ganda.
VaSocks vanoti VaBiden vari kuda kugadzirisa zvinhu zvakawanda zvavanoti zvakasiya zvakanganiswa nevanga vari mutungamiri weAmerica kwemakore mana apfuura, VaDonald Trump, asi VaBiden vachiti vachashandisa paramende, kwete zvekushandisa masimba avo semutungamiri wenyika, kana kuti Executive Order, sezvaigara zvakaitwa naVaTrump panyaya dzakadai.
Hurukuro naVaEmmanuel Ncube Socks
Kukadzi 17, 2021
Chando Chovhiringa Vanhu Zana neMakumi Mashanu eMamiriyoni muAmerica
Motikari iyi yakaputirwa nechando mudunhu reNew Jersey
Vanhu vanopfuura mamiriyoni zana nemakumi mashanu muAmerica vari mukati mechando chisati chamboonekwa munzvimbo dzeAmerica idzi kubva kumahombekombe egungwa reGulf of Mexico kusvika kumuganhu neCanada.
Chando ichi chinonzi chauraya vanhu gumi nevanomwe mu America uye chiri kunyanya kubata matunhu ekuchamhembe kweAmerica zvichikwidza kumusoro uye nechapakati penyika.
Dunhu reTexas ndiro rinonzi riri kunyanya kuvhiringwa nechando chinonzi chiri kukonzera tsaona dzakawanda mumigwagwa.
Vanoona nezvemamiriro ekunze vanoti chando chiri mudunhu reTexas hachisati chamboitika kwemakore makumi matatu nemaviri, vachiti panhandare yendege, yeHouston Intercontinental Airport, pari kutonhora zvisingaiti.
Vanoona nezvemagetsi vanoti chando ichi chakatonhora zvekuvhiringa michina inogaya izvo zviri kupa kuti magetsi mashoma shoma awanikwe. Vanhu vanoita mamiriyoni mana vakavhiringwa nechando ichi uye mamiriyoni maviri nechidimbu havana magetsi mudzimba dzavo.
Chizvarwa cheZimbabwe, VaPromise Sande, avo vanogara kuSouth Carolina, vanoti chando ichi chiri kufamba chakananga kumaodzanemba nekumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kweAmerica uko chiri kukonzera matambudziko makuru kuvanhu vari mumatunhu aya.
Hurukuro naVaPromise Sande
America Yoronga Kuumba Komisheni Ichaongorora Mhosva Yakapunyuka VaTrump?
Amai Nancy Pelosi
Mutauriri we US House of Representatives, Amai Nancy Pelosi, vanoti paramende ichaumba komisheni yakazvimirira ichaongorora chokwadi nezvikonzero pamusoro pemhirizhonga yakaitika paCapitol Hill musi wa 6 Ndira pakafa vanhu vashanu, pakakuvara vanhu vazhinji pamwe nekupunzwa kwezvinhu.
Amai Pelosi vanoti komisheni iyi ichange yakafanana nekomisheni yakaumbwa mushure menjodzi yakaitika musi wa 11 Gunyana, 2001 apo vanopfurikidza mwero vakabvuta ndege vakadzishandisa semabhambu kuparadza zvivakwa kuNew York nemuVirginia.
Vaimbove mutungamiri weAmerica, VaDonald Trump, vakapunyuka pamhosva yavaipomerwa yekupesvedzera vatsigiri vavo kuita mhirizhonga paCapitol Hill.
Mazuva mashoma apfuura, dare re Senate rakawana VaTrump vasina mhosva yavaipomerwa.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika, Muzvinafundo Elliot Masocha, vanoti komisheni inoongorora zvakadzama inofanirwa kuumbwa nekuti zvese zvakaitika, pamwe chete nezvikonzero, zvinofanirwa kubudiswa pachena kuitira kuti zvakadai zvisaitika zvekare.
Muzvinafundo Masocha vanoti zvakaitika izvi zvinokanganisa kuchengetedzwa kwenyika sezvo vatungamiri veAmerica vakange vakaungana pamwe chete.
Muzvinafundo Masocha vanoti chakanakira komisheni iyi ndechokuti ichaumbwa mushure mekudzikwa kwemutemo uchaipa masimba ekuita basa iri, izvo zvichaitwa nevamiriri vemapato ose.
Kukadzi 15, 2021
Nyanzvi Dzozeya reMangwana raVaTrump
Vaimbove mutungamiri weAmerica, VaDonald Trump, vakachenurwa nemusi weMugovera nedare reSenate iro rakavawana vasina mhosva yavakanga vachipomerwa.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzemitemo nezvematongerwo enyka dzinoti kuchenurwa kwaVaTrump uku kunovapa mukana wekukwikwidza zvekare mugore ra 2024, ndokana bato ravo ravatambira pamusangano mukuru weRepublican Party unotambira zviri pamutemo munhu anomirira bato iri musarudzo yemutungamiri wenyika.
Asi imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika, VaSilas Chekera, vanoti sekutaura kwakaitwa nemukuru weRepublican Party mudare reSenate, VaMitch McConnell, vachiti VaTrump vakapara mhosva, kunyange havo vasina kuvhota vachiroverera VaTrump nemhosva, VaTrump vanogona kuendeswa kumatare edzimhosva kwavanogona kutongwa vachiwanikwa vaine mhosva.
VaChekera vanoti pane dzimwe mhuri dzichadavo kuendesa VaTrump kumatare edzimhosva pamusoro pemhirizhonga iyi.
VaChekera vanoti pari zvino, magweta makuru emumatunhu eNew Yourk neGeorgia ari kutarisisa mhosva dzinonzi dzakaparwa naVaTrump izvo zvinogona kuvhiringa mukana yaVaTrump yekukwikwidza zvekare.
Hurukuro naVaSilas Chekera
Kukadzi 14, 2021
Dare reSeneti Rinoti VaTrump Havana Mhosva Yavakapara
Vaimbove mutungamiri weAmerica, VaDonald Trump, vawanikwa nedare reSeneti vasina mhosva yavanga vachipomerwa yekupesvedzera vatsigiri vavo kuita mhirizhonga musi wa Ndira 6 iyo yakasiya vanhu vashanu vafa, kusanganisira mupurisa aive pabasa.
Iyi yanga iri mhosva yechipiri mukati megore VaTrump vachipomerwa mhosva yekutyora mitemo yenyika.
VaTrump vapunyuka mushure mekunge mavhoti atadza kusvika makumi matanhatu nemanomwe anodiwa nemutemo kuti munhu abatwe nemhosva.
Maseneta makumi mashanu nemanomwe anosanganisira eDemocratic Party makumi mashanu, neeRepublican Party manomwe, avhotera kuti VaTrump vabatwe nemhosva iyi, ukuwo maseneta eRepublican Party makumi mana nematatu, avhota achiramba kuti VaTrump vakapara mhosva.
Kutongwa kwenyaya iyi kwasvika kumagumo mushure memamazuva mashanu vachuchisi veDemocratic Party vachitatsurana nemagweta aVaTrump.
VaTrump vakapedza temu yavo musi waNdira 20, mushure mekukundwa musarudzo naVaJoe Biden veDemocratic Party, avo vakatoreswa mhiko musi wa Ndira 20.
Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzinoti kuwanikwa kwaVaTrump vasina mhosva kunovapa mukana wekuti vakwikwidze musarudzo munguva inotevera.